Iindaba - ukuvunywa kwe-UL - I-BlackShields DC enikwe amandla I-Air conditioner iphumelele isiqinisekiso se-UL
Ukupholisa ikhabhathi yeTelecom
I-AC Air conditioner yeTelecom
Iyunithi yePeltier TEC yeTelecom
Isitshintshi sobushushu seTelecom
Thermosiphon Ubushushu Exchanger for Telecom
Ukupholisa iCombo kwiTelecom
ikhabhinethi edibeneyo yangaphandle
I-air conditioner (ikhabhathi yoshishino yangaphakathi)
Isipholisa-moya (ikhabhathi yemizi mveliso yangaphandle)
Ukupholisa inkqubo yokugcina amandla
I-Monoblock Air conditioenr ye-BESS
Iyunithi yokupholisa ulwelo lwe-Monoblock ye-BESS
Isilungisi-moya esinyuswe phezulu se-BESS
Ifriji esebenza ngemoto
Ukupholisa iziko ledatha
Izisombululo zolawulo lwemozulu ze-BESS
Ukuvunywa kwe-UL - I-BlackShields DC enikwe amandla I-Air conditioner iphumelele isiqinisekiso se-UL
IBlackShields iyavuya ukwazisa ukuba iimodeli ezi-2 ze-DC ezinikwe amandla kwiKhabhinethi yoMoya yoMoya elungiselelwe umthengi wase-US uphumelele imvume ye-UL. Emva kovavanyo oluninzi kunye nokuhlolwa, i-Underwriters Laboratories isayine imvume ye-UL kwiimodeli ezi-2 ze-DC air conditioner.
Siyazingca ukuba i-DC enikwe amandla i-Air conditioner ixhotyiswe ngesethi yomlawuli kubandakanya umlawuli, umqhubi we-DC Compressor kunye nokukhuselwa kombane okuyi-R & D yi-BlackShields. Oku kuthetha ukuba i-BlackShields inokubonelela nge-air conditioner ye-DC eyahlukileyo kunye nemvume ye-UL ngesicelo somthengi.
I-BlackShields ivelisa iKhabhinethi ye-DC Air conditioner esetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zeTelecom ngaphandle kwegridi yamandla okanye ukusebenzisa umbane oxutyiweyo.
I-DC air conditioner ixhotyiswe nge-True DC powered compressor (akukho inverter) kunye nabalandeli be-DC abanokulungelelanisa isantya ngokusekelwe kwisicelo sokupholisa kwikhabhinethi. Unikezelo lwamandla kwikhabhinethi esebenza ngeDC Air conditioner yi -48V enokuthi iqhutywe ngokuthe ngqo ngebhetri kwiziza. I-compressor ye-DC inokuqalisa ngokuthambileyo ukunqanda i-inrush yangoku ukonakalisa ijenereyitha.
I-BlackShields inikezela nge-DC amandla kwikhabhinethi yomoya womoya (umthamo wokupholisa ukusuka kwi-300W ukuya kwi-4000W) kwizicelo ezahlukeneyo.
Nceda uqhagamshelane nathi ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Ixesha lokuposa: Jul-29-2021
No.9, Tianduoli Rd, Yangchenghu Town, Xiangcheng District, Suzhou City, Province Jiangsu, China, 215138
© Copyright - 2009-2021 : Suzhou BlackShields Environment Co., Ltd. Onke Amalungelo Agciniwe.